Culebra's Culebrita Island Review
Kudzokorora kweCulebra's Culebrita Island
Uyai kuCulebra nokuda kwekunaka kwayo-kune-chimiro uye rustic, chisina kusimbiswa. Zvadaro enda kuCulebrita kuti uone kuti kunaka kwakasikwa kwakasikwa chii chaizvo.
Hazvizombovi neboka reCulebra's Flamenco Beach, richikupa zvakawanda zveimwe nzvimbo.
Inongova tekiti shomanana remvura chete, iri nyore hafu yezuva kana rwendo rwezuva rose kubva pachiwi.
Sarudza kubva pane zvaunosarudza zvingangove zvitsva zvina zviri nyore kusvika.
Kufuratira paTrash Beach kwakaoma uye hazvikurudzirwi kushambira.
Mvura tekisi haisi iyo inodhura kupfuura, asi ndiyo chete inotasva.
Hakuna vakachengeteka kana zvivako chero kupi zvako paCulebrita.
Sezvo pasina chinhu chiri pachitsuwa chacho, iva nechokwadi chekuunza mvura, tirasi uye mapikini masikati kana iwe uri kushandisa zuva iri pano.
Chigadziro choga chaCulebrita, chivako chayo chechiedza, chakavakwa muma1880 uye chakavharwa kune vashanyi. Asi iwe unogona kukwira kumusoro.
Inofamba paTrash Beach yakaoma uye haina kukurudzirwa kushambira.
Review Review - Ongororo yeCulebra's Culebrita Island
Ndinoda Culebra; Ndinoda nzvimbo yakaderera-inokosha, hukama hwayo hwemusha, uye mahombekombe ayo akanaka, asina kunyatsogadzirwa. Ndinoda zvisakarurama zvaro, sematangi maviri e rustic paFlamenco Beach, Dick naCathie's "Zvinhu", uye anogara akazivikanwa neChitsuwa Mudzimai.
Asi chimwe chezvikonzero zvikuru zvandinoda Culebra hachisi kunyange pachitsuwa chacho, asi mvura-tekisi inotasva kure.
Culebrita (iyo inoreva nyoka shomanana kuna nyoka yaCulebra) inenge iri kunze kwenyika-paradhiso. Chinhu chimwe chete chinogadzirwa nemunhu chinosvibisa; kechidiki, kunze kwebasa reimba reimba iro rinowedzera pachitsuwa chekuona chitsuwa chacho saka rakasiyiwa rinenge rinowedzera kuwedzera kunaka kwepanyama. Icho chikonzero chaicho Culebrita chinopenya ndiyo inounganidza mabheji akanaka.
West Beach , uko Mvura yeMatokisi, iyo ine mutsara wakawanda wejecha unotarisa mhuka inotyisa yebhuruu uye maruva machena egungwa. Mvura inonyengera uye inopa bounty yehove, turtle uye coral kune vanobata nyoka.
Playa Tortuga inongova imwe chete yemhenderekedzo dzangu dzinodiwa kuPuerto Rico. Iyi inzvimbo yakakura uye inofadza ine mvura yakanyorova inodzivirirwa kune rumwe rutivi nechemberi, inopoteredza zvombo zvedombo, ichigadzirisa nzvimbo yakagadzikana yakagadzirirwa ne lighthouse uye zvinyorwa zvishoma. Playa Tortuga inewo, pamucheto wayo wekumabvazuva, nzvimbo yemvura isina mvura uye mazai akakwana kuvana vezera ripi zvaro.
Kurutivi rwezasi rwechitsuwa ichi pane Culebrita Reef, inonzi Los Corchos nevanhu vemo. Uye munzira inoenda kuAlaya Tortuga ndiTrash Beach , iyo inodanwa nokuti yakawanda yemarara nokuda kwekusarura kana kusava nehanya kunopera pano. Nenzira yakanaka, zvose zvandakaona pane twine maduku ePaya Tortuga, pamwe nezvimwe zvinobatsira zvemaonero eSt. Thomas ari pedyo.
Mabheji aro anoita Culebrita nzvimbo yakakodzera kune avo vanoda zvechokwadi kupukunyuka hupenyu, vanogara pamhenderekedzo yegungwa, kushambira mumvura isina kudzika, mvura inotsvoda, uye vanoona kururamisa kweupenyu hwegungwa. Ndezvipi zvakare zvaungabvunza kubva kuchitsuwa?
Ndekupi uye Zvokudyai paKrisimasi muSan Juan
Chuletas Can-Can, the Delicious Puerto Rican Nguruve Dish
Mutungamiri weVièques 'Gungwa
Kwokuda Kutamba Golf muPuerto Rico
Garai neKeve Dzakakwirira mushure mePuerto Rico's Best Restaurants
Halloween Inofara Kune Vakuru muNew York City
Super Bowl XLV Tarisa Zvikwata
Tsvaga Holland's Sandcastle Hotels
Best Day Spas Kuratidzwa muNew Jersey
Nzvimbo Dzakanakisisa Zvose Dzakabatana muGuadeloupe
Little Nell Hotel kuAspen, Colorado
Nzira Yokuwana Nayo Pasi Pasi Pasi paJFK Airport
Kwamunoenda Horseback Riding Around Kansas City
French Public Holidays muna 2016
Chakavanzika San Diego: City's Best Off-the-Beaten-Track Sites
Hale Centre Theatre muGilbert